RØDE Inoburitsa Zvakawanda iyo Podcast Production Studio! | Martech Zone
RØDE Inoburitsa Zvakawanda iyo Podcast Production Studio!
Chipiri, Zvita 11, 2018 Chipiri, Zvita 11, 2018 Douglas Karr
Chinhu chimwe chandisiri kuzogovera mune ino positi imarii nenguva zvandashandisa kutenga, kuongorora, uye kuyedza zvishandiso zvepodcast yangu. Kubva pamusanganisi uzere uye studio, kune compact studio yandinogona kutakura mubhegi, kudzika kuma USB mamaikorofoni ndinogona kunyora kuburikidza nelaptop kana iPhone… Ndakaedza ese.
Dambudziko rekufambidzana ragara riri mubatanidzwa we mu-studio nevari kure vashanyi. Inyaya yakadaro zvekuti ndakatobata vamwe vagadziri kuti ndione kana ndichigona kuve neumwe munhu anovaka prototype.
Haisi dambudziko rakaomarara, asi zvinoda zvimwe zvinoshanduka Hardware. Paunenge uine vaenzi vakawanda kuwedzera kune mushanyi ari kure, iyo latency yemuenzi ari kure inokonzeresa maungira ezwi ravo vega mumusoro mavo. Saka, iwe unofanirwa kugadzira bhazi rinosiya izwi remuenzi ari kure mune zvakaburitswa kwavari. Izvi zvinozivikanwa sekusanganisa-kubvisa.
Asi ini handikwanise kutenderera ndichitenderedza chinogadziriswa chinosanganisa mumugwagwa kuwedzera kune zvese zvishandiso, saka ndafunga kuti ndogadzira sei kumisikidza kumwechete ndichishandisa bhazi chairo pane yangu MacBook Pro. Uye zvichiri marwadzo muchibato chekumisikidza.
Izvo zvese zvachinja.
Zvino, munhu wese ane hope dzekugadzira podcast yehunyanzvi-yemhando anozokwanisa kuzviita zvisina musono neichi chitsva uye chine simba chikuva. Iyi inongedzo nyowani inoshamisa yeRØDE: iyo-ye-imwe-studio yeepodcasters eese nhanho.
Ini ndanga ndichishanyira videographer wangu nhasi, Ablog Cinema, uye anga abvunza kana ndaona iyo nyowani RØDECaster Pro - Podcast Production Studio. Heino pfupiso.
Asi mira… pane zvakawanda. Heino yakajeka rundown:
RØDE akafunga zvese here? Pa-bhodhi maficha anosanganisira:
4 maikorofoni chiteshi: Kirasi A, servo yakavakirwa zvigadzirwa zvinokwanisa kupa simba studio condenser mamaikorofoni pamwe neyakajairika simba mamaikorofoni.
Patsanura zvigadzirwa zve3.5mm TRRS (foni kana chishandiso), MAKARALI USB (foni kana chishandiso) uye USB (yemimhanzi / odhiyo kana app mafoni)
Foni uye app kufona - isina echo (sanganisa-minus). Nyore gadzirisa nhanho - hapana giya rekuwedzera kana yakashata seti-kumusoro inosanganisirwa.
Zvirongwa zvinonzwika mhedzisiro mapads: 8 color coded kurira mhedzisiro inokonzeresa inogadziriswa jingles uye mhedzisiro.
Inogadzirirwa muRØDECaster ™ Pro kana kubva pakombuta yako kuburikidza neiyo software.
APHEX® Inonakidza ™ uye Big Bottom ™kugadziriswa kwepamutemo kweiyo yakapfuma, inodziya toni inongowanikwa muhunyanzvi nhepfenyuro masisitimu. Zvakare inosanganisira multistage dynamics: kumanikidza, kudzikisira uye ruzha-gating.
Bata-skrini inobvumira kudzora kuri nyore kwenzvimbo dzese, kusanganisira zvakaenzana zvekuseta kwehurefu hwekutaura kwehunyanzvi.
Makumi mana emagetsi epamusoro-soro uye mutauri we stereo kunze, imwe neimwe iine yakazvimirira vhoriyamu kudzora.
Zvinyorwa zvinotungamira kune microSD Kadhi yekuzvibata-izere mashandiro, kana kune yako yaunofarira komputa uye software kuburikidza neUSB.
Rarama kutenderera kugona.Nhasi redhiyo!
Ichi hachisi chinhu chipfupi chinoshamisa! Kuva nezvirongwa zvinonzwika zvine mutsindo zvinondibvumidza kufanotangisa rondedzero yangu, kunze, uye kushambadza pane nhunzi kuitira kuti ndikwanise kunyatso rekodha uye kurodha pane yangu podcast yekutambira.
Ko Zvakadii Live Vhidhiyo?
Imwe mukana wechikamu ichi kugona kuibatanidza nehurongwa senge Swatch Studio. Iyo stereo inoburitswa inogona kutyaira odhiyo pane yako mhenyu-yakabatana chishandiso uye iwe unogona kuchinjika kumashure nekudzoka pakati pePads nemuenzi wako kuburikidza neiyo iPhone FaceTime kana Skype kufona!
Ndine rwendo gore rinouya rekunyora zvimwe Luminaries podcast naDell… Uye chikamu ichi chichave kuenda neni. Chidimbu ichi chinorema mukati angodarika mapaundi matanhatu saka hachizonyanyo kuve chakakomba kutenderera. Wedzera maikorofoni, tambo, uye mahedhifoni uye ini ndinogona kuda kuwana chimwe chinhu chine mavhiri, asi izvo zvakanaka.
Dai ndaive nekunyunyuta kumwe chete zvaizove kuti iyo unit haingaite yakawanda-track rekodhi. Nekudaro, kana muyenzi akosora apo mumwe muenzi ari kutaura… iwe wakanamatira nazvo kana iwe unofanirwa kumisa iyo show uye kunyora zvakare chidimbu, wobva wamisa zvikamu pamwechete mukugadzirwa kweposvo. Ngatitarisirei kuti remangwana shanduro dzinogonesa akawanda-track kurekodha kuburikidza neiyo micro-SD kadhi uye USB zvinobuda.
Tenga iyo RØDECaster Pro paSweetwater
Tags: YeMahara neThebhu Kushambadzirapodcast studiotsvukuRØDECasterUSBusb c
Dhizaini Kufunga: Kushandisa Rose, Bud, Thorn Zviitiko kuMushambadziro